Antsonjombe : Tsy nahasarika olona i Franko Coller La petite -
AccueilVaovao SamihafaAntsonjombe : Tsy nahasarika olona i Franko Coller La petite
Antsonjombe : Tsy nahasarika olona i Franko Coller La petite
01/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Efa tandindonin’ireo seho maimaimpoana, mandritra ny fampielezan-kevitra ve mpijery malagasy ? Saika vitsy tsy araka ny nantenain’ireo mpikarakara ny fahatongavan’ny mpijery tamin’ireo seho samihafa teto an-drenivohitra. Anisan’ireo tsy nahasarika olona nandritra ny seho nataony tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny sabotsy lasa teo ilay mpanakanto Kameroney, Franko Coller la petite. Vitsy amin’ny malagasy rahateo no mbola mahay ny sangan’asan’io mpanakanto io.
Babangoana tanteraka ny Coliseum, na dia nanasa ireo mpanakanto malagasy, anisan’ny sangany amin’izao fotoana aza ny mpikarakara, raha tsy hilaza afa-tsy i Stéphanie.
Anisan’ny seha-draharaha sarotra ny fikarakarana fampisehoana, indrindra ho an’ny eto Antananarivo. Maro amin’ireo mpikarakara fampisehoana no efa mahafantatra ireo fepetra samihafa ahafahana mikarakara seho iray, misy koa anefa ireo mihevitra fa fomba mora ahazoana vola ny fikarakarakana fampisehoana. Na dia manana ny lazany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza, i Franko Coller La Petite, dia tsy nanaitra ny Malagasy ny fampisehoana niarahana taminy. Nanaporofo izany ny tsy namalian’ny mpijery ny antson’ny mpikarakara sy ny mpanakanto. Maro amin’ny malagasy rahateo, na ny eto an-drenivohitra, izay heverina ho maharaka amin’io fivoaran’ny mpanakanto eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza, no tsy mahay ny hiran’ity mpanakanto ity afa-tsy io « Coller la petite ». Misy aza no tsy mahalala azy mihitsy, nefa dia nitsapa vintana nihazo avy hatrany an’i Coliseum, izay mahazaka mpijery hatramin’ny 50 000.
Antsofinondry : MANANA “DAB” NY PAOSITRA MALAGASY
Voalohany eo amin’ny tantaran’ny paositra malagasy no nahafahany manana DAB na “Distributeur Automatique des Billets” ka ny biraon’ny paositra vaovao eny Antsofinondry no santatra amin’izany. Tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany ary omaly no natao ...Tohiny
Fandraisana ny taona vaovao : Nosantarin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny vavaka ny taona 2018
Filankevitry ny minisitra ao Toliara : Hifantoka amin’ny fampandrosoana ny faritra Atsimo
Jean Eric Rakotoarisoa : “Misy ireo mafy toto tsy manao fanambaram-pananana”